Wariyihii Tv-ga Universal oo goor dhow lagu dilay Laascaanood. - Caasimada Online
Home Warar Wariyihii Tv-ga Universal oo goor dhow lagu dilay Laascaanood.
Wariyihii Tv-ga Universal oo goor dhow lagu dilay Laascaanood.
Allaha u Naxriistee Waxaa goordhaw oo caawa ah lagu dilay Magaalada Laas Caanood, Wariye Axmed Saakin Faarax oo ahaa Wakiilkii Tefishinka Universal ugu soo warami jiray Magaalada Laascaanood ee Xarunta Gobolka Sool.
Warar kala duwan ayaa ka soo baxay dilka loo geestay Wariye Axmed Saakin, iyadoo warar qaar ay sheegayaan in Dilka loo geestay Wariyaha uu ahaa mid qorsheysan waxaana dilay Kooxo Hubeesan oo aan heebtooda la garan iyadoona wali aan faah faahin dheeraad ah laga helin dilkan goordhaw oo caawa ah loo geestay Wariye Axmed Saakin Faarax.
Axmed Sakiin Faarax ayaa waxa uu ahaa Wakiilka Rasmiga ah Telefishinka Universal ee Xaruntiisa tahay Dalka Britain ugu soo warami jiray Magaalada Laascaanood .
Lama Ogo sababta loo dilay Wariye Axmed Saakin faarax, balse waxa uu dilkiisa qeyb ka noqonayaa Beegsiga iyo Ugaarsiga lagu hayo suxufiyiinta ka howl gala gudaha Soomaaliya.